ओमकार टाइम्स रहेनन् विराटनगरका बालरोग विशेषज्ञ डा. विमल अग्रवाल - OMKARTIMES
रहेनन् विराटनगरका बालरोग विशेषज्ञ डा. विमल अग्रवाल
मोरङ : विराटनगरका बालरोग विशेषज्ञ डा. विमल अग्रवालको मंगलबार राति निधन भएको छ ।
केही दिनअघि सामान्य समस्या भएर विराटनगरको नोबेल अस्पतालमा भर्ना भएका अग्रवालको मंगलबार राति करिब साढे १० बजे निधन भएको हो ।
६ वर्षदेखि विराटनगरको कोसी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत ४० वर्षीय अग्रवाललाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि केही दिनअघि आफै गाडी चलाएर नोबेल अस्पताल पुगेका थिए । पछि उनलाई हृदयघात भएपछि उनको अवस्था नाजुक बन्दै गएको थियो ।
अग्रवालका सहपाठी विकास वेगवानीले आ नोबेल अस्पतालका चिकित्सकले करिब १० बजेर ३० मिनेटमा मृत घोषित गरेको जानकारी दिए ।
अग्रवालको उपचारका क्रममा ईसीजी गर्दा केही असहज देखिएपछि इको गरिएको थियो । इकोका क्रममा मुटुको धमनी अवरुद्ध रहेको देखिएपछि एन्जियोग्राफी गर्न नोबेल लैजाने भनेर डा. अग्रवालले अस्पतालबाट बिदा स्वीकृत गराएका थिए ।
उपचारका क्रममा एक हप्ताअघि अवस्था गम्भीर बनेपछि डा. अग्रवालका विषयमा भारतको मेदान्त अस्पताल र काठमाडौंका वरिष्ठ चिकित्सकसँग पनि थप उपचारका लागि सल्लाह गरिएको थियो । तर अन्य अस्पताल लैजान सम्भव नभएपछि नोबेल अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो ।
नोबेल अस्पतालका चिकित्सकले डा. अग्रवालको ब्रेेेन डेड भइसकेको बताएका थिए । विराटनगरको जहदा रोडमा घर भएका अग्रवालका श्रीमती र एक छोरी छन् ।